I-Dyszno Las - indlu ye-lineman ehlathini, i-2 km ukusuka echibini
Dyszno, West Pomeranian Voivodeship, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJustyna
I-Dyszno Las yindlu yelineman enomtsalane kwindlela kaloliwe edityanisiweyo, esembindini wehlathi, iikhilomitha ezi-2 ukusuka echibini.
Indlu yezitena, ejikelezwe kwicala ngalinye ngehlathi, ifumaneka kwisiqingatha sehektare, indawo ebanzi. Le ndlu siyirenta kuphela Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Kumgangatho wokuqala - indawo evulekileyo eneebhedi ezimbini kunye nendawo yokuphumla okanye yokudlala, kunye negumbi lokulala. I-Dyszno Las ikwindawo ekude, kwaye ungafika kwilali ekufutshane-iDyszno ngendlela egangathiweyo.
I-Dyszno Las yindawo efanelekileyo yosapho olunabantwana. Ukuba unayo, indawo evulekileyo, icebo eliluhlaza liya kubanika amathuba angenamkhawulo wokudlala ngaphandle, kwaye ihlathi elijikeleze indlu liya kuba yindawo efanelekileyo yokuhamba kwehlathi, ukuhamba kweeholide, ukuhamba okungenakulibaleka kunye nokufunda malunga neemfihlo zendalo. Okona kumnandi kubakhenkethi abancinci silungiselele ithala leencwadi lehlathi kunye nenkuthazo eninzi yemidlalo.
I-Dyszno Las ikwayindawo enkulu yomsebenzi wokudala. Izolile, iatmospheri, inefenitshala entle kwaye ixhotyiswe kakuhle. Nokuba ufuna ukuphumla okanye ukusebenza - apha uya kuziva ulungile.
Igumbi lokuhlala linesofa ekhululekile kunye nomsebenzi wokulala, indawo yomlilo, isifuba esivulekileyo sedrowa kunye neseti yeTV. Kwindawo yokutyela - itafile egotywayo enezihlalo, kunye nethala leencwadi elineencwadi zendalo ezikhethiweyo kunye neengxelo.
Ikhitshi yindawo onokuthi ulungiselele kuyo ngokulula ukutya okumnandi kwasehlotyeni kwabo ubathandayo. Isitovu sokungeniswa, i-oveni, ifriji enkulu, umatshini wokuhlamba izitya, iikhabhathi eziphangaleleyo kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo ziya kukuvumela ukuba ulungiselele izitya oya kukwazi ukonwabela ukuzitya kwindawo evulekileyo phambi kwendlu. Kwaye ukuba unesithukuthezi kukupheka kwendabuko, unokuhlala usebenzisa i-barbecue yethu okanye ulungiselele isidlo sakusihlwa kwi-cauldron phezu komlilo.
Igumbi lethu lokulala linebhedi ephindwe kabini kunye nomatrasi otofo-tofo, iwadilophu endala, isifuba sedrowa kunye nezinto ezininzi zothando. I-cubicle yeshawari ekhululekile kwigumbi lokuhlambela.
Kumgangatho wokuqala, sinegumbi elikhulu, lokulala elithandanayo kunye nebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe endala kunye nebhentshi yesikolo engavamile, apho unokusebenza ukude, ujonge ukubonwa kwemithi ngaphandle kwefestile. Ukongezelela, silungiselele indawo evulekileyo yokuzonwabisa okanye ukuphumla kwi-attic yangaphambili. Apha uya kufumana i-armchair ekhululekile, isifuba esivulekileyo sedrowa kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga (indawo egqibeleleyo yabantwana).
Siyazithanda izilwanyana, kodwa ngabanini bezinja ezincinci neziphakathi bamkelekile endlwini yethu.
Silukhathalele ukhuseleko kunye nempilo yakho - siya kubulala iintsholongwane endlwini ngaphambi kokufika kwakho.
Ukuhlala iveki enye kuphela kunokwenzeka ngoJulayi nango-Agasti.
Indlu ijikelezwe macala onke ngehlathi eligcwele indalo yasendle kunye namakhowa. Iikhilomitha ezimbini ukusuka kwindlu, i-Ostrowieckie Lake kunye nokugcinwa kweCzapli Ostrów ikulindele. Ungaloba apho okanye uye kuqubha ecaleni kolwandle oluncinci kunye ne-pier. Zininzi iindlela zebhayisekile kule ndawo, kodwa ukuba uyayithanda imidlalo yangaphandle, ngokuqinisekileyo awuzukuphelelwa yindawo - ungaqala intsasa yakho ukubaleka ehlathini kanye emnyango wakho. Kwaye ukuba izibiliboco uhambo olufutshane, kukho inala iindawo ezintle elinde wena kule ndawo -. Kwilali Dyszno kunye Humboldt Linden yayo emikhulu, i "Ujście amade" Ipaki kaZwelonke okanye kumhlaba okumangalisayo Myślibórz Lake weSithili okanye IBerlin emangalisayo ziiyure ezimbini kuphela ngemoto ukusuka ekhaya. Nangona kunjalo - siya kukuxelela malunga nazo zonke izinto ezinokwenzeka.
Singathanda ukuba uphumle ngoxolo nangokuzola. Ke ngoko, asiyi kukuphazamisa ukuphumla kwakho kwaye sikuvumele ukuba uzintywilisele ekuthuleni kwehlathi. Nangona kunjalo, ukuba siyafuneka - unokuhlala usibiza. Siyavuya ukunceda ngayo yonke into.
Ukufudumeza indlu, kufuneka uzitshise eziko. Sinendawo yomlilo kunye nejacket yamanzi efakwe, kuthetha ukuba ukuba kukho umlilo kuyo, ukushisa kuya kusasazeka kwii-radiators kuyo yonke indlu.
Ukufudumala, beka umlilo eziko ngalo lonke ixesha. Emva koko uya kudala umoya ongaqhelekanga, wothando kwindlu yehlathi.
Singathanda ukuba uphumle ngoxolo nangokuzola. Ke ngoko, asiyi kukuphazamisa ukuphumla kwakho kwaye sikuvumele ukuba uzintywilisele ekuthuleni kwehlathi. Nangona kunjalo, ukuba siy…